‘Adɛn nti na Onyankopɔn ne me redi?’ (2)
Onyankopɔn nte sɛ onipa Hiob (4-12)
‘Ɔmma me ho ntɔ me kakra’ (20)
10 Me nkwa afono me.*+ Mɛka me haw. M’amanehunu mu* na mɛka m’asɛm! 2 Mɛka akyerɛ Onyankopɔn sɛ: ‘Mmu me fɔ. Kyerɛ me nea enti a wo ne me redi. 3 Enti woreteetee me yi, eye ma wo?Na wo nsa ano adwuma a womfa no nyɛ hwee yi, eye?+Abɔnefo afotu mmom na wopɛ? 4 Adɛn, w’ani yɛ onipa ani?Anaa sɛnea onipa dasani hu ade no, saa ara na wuhu no? 5 Wo nna te sɛ ɔdasani nna anaa?Anaa wo mfe te sɛ nnipa mfe?+ 6 Ɛnde adɛn nti na wohwehwɛ me ho mfomso,Na wokɔ so hwehwɛ bɔne wɔ me ho?+ 7 Wunim sɛ minni fɔ;+Na obiara rentumi nnye me mfi wo nsam.+ 8 Wo ara wo nsa na ɛnwenee me; ɛno ara nso na ɛyɛɛ me.+Nanso seesei wunya a wobɛsɛe me afi hɔ koraa. 9 Mepa wo kyɛw, kae sɛ dɔte na wode yɛɛ me,+Nanso seesei worema masan adan mfuturu.+ 10 Woanhwie me te sɛ nufusu angu me maame yam anaa?*Na woamma manyɛ sɛ nufusu a ada ama adan kyiis anaa? 11 Wode were ne honam duraa me ho,Na wode nnompe ne ntini nwenee me boom.+ 12 Woama me nkwa, na wode ɔdɔ a enni huammɔ adɔ me;Wohwɛɛ me yiye, na wohwɛɛ me nkwa* so.+ 13 Nanso wohyɛɛ da bɔɔ me ho pɔw sɛ wode saa nneɛma yi bɛyɛ me.* Minim sɛ saa nneɛma yi fi wo. 14 Sɛ meyɛ bɔne a, wubehu me;+Anka woremfa me mfomso nkyɛ me. 15 Sɛ midi fɔ a, asɛm ato me! Na sɛ midi bem mpo a, merentumi mma me ti so,+Efisɛ animguase ne amanehunu ahyɛ me ma.+ 16 Sɛ mema me ti so a, wohwehwɛ me kyere me te sɛ gyata,+Na wosan de wo tumi bu fa me so. 17 Wode adansefo foforo ba bedi adanse tia me,Na woma w’abufuw yɛ kɛse wɔ me so;Amanehunu baako ba a, na amanehunu foforo di so. 18 Enti ɛyɛɛ dɛn koraa na wuyii me fii me maame yam bae?+ Minyae a anka miwui, na ani biara anhu me. 19 Anka ɛbɛyɛ sɛ nea mamma wiase koraa.Anka bere a woyii me fii ɔyafunu mu ara pɛ, wɔde me bɛkɔ ɔdamoa mu.’ 20 Me nna nyɛ kakraa bi anaa?+ Ma onnyaa me;Ma onyi n’ani mfi me so, na me ho ntɔ me kakra*+ 21 Ansa na makɔ. Mekɔ a, meremma bio.+Mɛkɔ esum kabii asaase so,*+ 22 Mɛkɔ asaase a esum tumm wɔ so so,Asaase a esum kabii ne sakasaka wɔ so,Baabi a hann mpo yɛ kusuu.”
^ Anaa “Me nkwa afono me kra.”
^ Anaa “Me kra awerɛhow mu.”
^ Anaa “Wuhwiee me te sɛ nufusu guu me maame yam.”
^ Anaa “home; honhom.”
^ Nt., “Na wode saa nneɛma yi ahintaw wo komam.”
^ Anaa “m’ani nnye kakra.”
^ Anaa “Mɛkɔ esum ne owu sunsuma asaase so.”